Izizathu Ezintathu Ezinokwenzeka Zokuzila Ukuhlolwa Kwe-Plasma Glucose> 7 mmol / L-Diabetes Talks-Sinocare
Izizathu Ezintathu Ezinokwenzeka Zokuzila Ukuhlolwa Kwe-Plasma Glucose> 7 mmol / L
Isikhathi: 2020-04-16 Hits: 229
Njengoba ushukela omkhulu we-plasma glucose ungeke welashwe umane ngokwandisa umthamo we-hypoglycemics. Ngaphambi kokutholakala kwezizathu, izixazululo zingahluka ngokuphelele ngezinga elifanayo eliphezulu lokuzila okusheshayo kweplasma glucose.
Liyini ushukela we-plasma glucose?
I-glucose esheshayo ye-plasma isho izinga likashukela wegazi elilinganiswa ngemuva kokuzila ukudla amahora angama-8 ~ 12 (okusho noma yikuphi ukudla akunakuthathwa, kepha amanzi angadakwa).
Ngokuvamile, izinga likashukela wegazi libhekwa njengeliphezulu kakhulu lapho ushukela we-plasma glucose ungaphezu kuka-7 mmol / L.https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level
Ukuze wazi izindlela zokwelashwa, izizathu zokuzila ukudla okushesha kweglucose kufanele zitholakale kuqala.
1. Inani eleqile lesidlo sakusihlwa ebusuku edlule.
Lesi yisizathu esivame kakhulu sokuzila ukudla okusheshayo kwe-glucose ye-plasma, okuhambisana nenani kanye nekhwalithi yokudla kanye nokudla ebusuku.
Ngokudla ngokweqile kepha ngaphandle kokuzivocavoca ukudla ngemuva kokudla, ukusetshenziswa okungatheni kwenzeka ebusuku, ukuze kwandiswe inani likashukela ekhishwe ngokudla kube yigazi. Impela, ushukela omkhulu we-plasma glucose nawo ungabangelwa isidlo sakusihlwa sakamuva.
Ngaphezu kwalokho, ushukela omkhulu we-plasma glucose ubalulekile futhi esifundeni sokuphumula nesimo sokulala ebusuku. Uma ukungalali kahle nokulala kungabonakali ebusuku noma uma imizwa emibi nokukhathala okukhulu kuvela ebusuku, ushukela we-plasma osheshayo uzoshintsha ekuseni, futhi ngezinye izikhathi uphezulu noma uphansi.
Uma ushukela omkhulu we-plasma glucose ephezulu usenzeka ngezikhathi ezithile, akunandaba kakhulu, futhi i-hyperglycemia ingathuthukiswa ngokulawula ukudla nokuhamba nje ngemuva kokudla. Uma ushukela we-plasma glucose ophakeme kakhulu uvame ukwenzeka, kufanele kubhekwe izici ezimbili ezilandelayo.
2. Isifo sikashukela i-mellitus dawn phenefon: izinga likashukela wegazi aliphansi ebusuku kepha liyavuka ekuseni
Iglucose yegazi ayilungiswa kuphela ngamandla akhishwe ekudleni, kodwa futhi ilawulwa ngama-hormone ahlukahlukene, iningi lawo elingakhuphula izinga le-glucose (kufaka ne-glucocorticoid kanye ne-hormone yokukhula ne-ect.).
Ekuntweleni kokusa, la mahomoni aqala ukukhuphuka kancane, asebenze kuma-glycogen agcinwe esibindini / emisipha futhi akhishwe ekuhambeni kwegazi; lapho-ke izinga likashukela wegazi likhuphuka ngokufanele.
Ngokwesayensi yezokwelapha, ukukhuphuka kwamazinga kashukela egazini ekuntweleni kwawo kubizwa ngokuthi yi -abetes mellitus dawn phenomenon. Ngenxa yethonya lamahomoni e-hyperglycemic, izinga loshukela wegazi likhuphuka kancane kancane. Ngakho-ke, ushukela we-plasma osheshayo ungahle ube mkhulu kunoshukela wegazi ongaphambi kobusuku bangaphambilini.
Ukuqapha kanjani? Lapho ushukela wegazi uzinze kakhulu futhi i-hypoglycemia ingenzeki ebusuku kepha ushukela wegazi ukhuphuka kancane kancane entathakweni bese kuqhuma ushukela we-plasma ushukela ngaphambi kwesidlo sasekuseni.
Ukwelashwa kanjani? Ngokusekelwa kokuphikelela kokuselapha okujwayelekile kokudla, izikhathi zokudla zingakhuphuka ngokufanele (ie 4 ~ 5 ukudla ngosuku).
Okwamanje, ukudotshwa komuntu munye kufanele kwandiswe cishe ngehora elilodwa ngaphambi nje kokulala ebusuku; ukudla okuncane okuqukethe ama-carbohydrate namaprotheni kungathathwa, njengengilazi eyodwa yobisi, isitsha esisodwa se-congee noma izingcezu ezimbalwa zesinkwa. Ngalezi zindlela, inani lemfihlo nokuzwela kwe-insulin ebusuku kungathuthukiswa kangcono.
Noma, udokotela ubonakala ngokuqondile ukulungisa uhlobo lokwelashwa futhi andise umthamo we-hypoglycemics.
3. Umphumela we-Somogyi: izinga likashukela wegazi liphansi kakhulu ebusuku, kepha livuka ekuseni
Lapho i-hypoglycemia ivame ukwenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela, indlela yokuzivikela isungulwa emzimbeni wayo, futhi imfihlo yokuqothuka kwamahomoni e-hyperglycemic okukhulunywe ngayo iyanda, ukuze kwandiswe izinga le-glucose futhi kubangele i-hyperglycemia yesibili. Le nto ibizwa ngokuthi Somogyi.
Ukuze ufanelekele ukuqwashisa, ezigulini ezinesifo sikashukela ezinomphumela weSomogyi, izimpawu ezijwayelekile ze-hypoglycemia kwesinye isikhathi azenzeki njengokuthi ukubhuqa nokujuluka okubandayo; Okwamanje, njengoba belele, ukutholakala kwe-hypoglycemic coma kuba yingozi kakhulu.
I-Hypoglycemia phakathi kwamabili ibikezela ukuqala kobusuku.
Ukuqapha kanjani? Ukuze kwehliswe umthelela wokulala, iglucose yegazi ibhekwa ngehora lesi-2: 00 ~ 3: 00 ekuseni Lapho izimo zivunyelwe, ukuqashwa kuka-24h kweglucose yegazi kwenziwe kangcono ezibhedlela.
Uma i-hypoglycemia iboniswa ngokulinganisa ku-0: 00 ~ 4: 00 (ie ≤3.9 mmol / L), ukukhuphuka kokushesha kwe-plasma glucose ngaphambi kokudla kwasekuseni kubangelwa umphumela kaSomogyi.
Kuyisisekelo sokuxazulula umphumela weSomogyi ukuthatha ukudla okujwayelekile / ukuzivocavoca umzimba futhi uthathe ama-hypoglycemics ngethamo elifanele.
Ezigulini ezinesifo sikashukela ezithola izidakamizwa ezisebenza nge-sulfonylureas ezisebenza isikhathi eside (ezinjenge-Gliclazide Sustained-release Tablets kanye ne-Glimepiride Tablets), i-insulin eqashelwe kanye ne-insulin esebenza kanye noma i-insulin esebenza isikhathi eside, kufanele kubhekwe ngokukhethekile umthelela womphumela we-Somogyi.
Ukwahlukaniswa kokudla yisilinganiso esihle sokuvimbela umphumela weSomogyi.
Ezigulini zikashukela ezine-glucose ephezulu yegazi (> 10 mmol / L) kanye ne-glucose yegazi ephansi, i-1/3 yesidlo sasebusuku ingathathwa ngo-21: 30 ~ 22: 00 pm
Uma i-predormital blood glucose ingu- <6.5 mmol / L, ukudla okulula kungabhekwa.
Ngokucacile, uma ukudla kuguqulwa ebusuku, ushukela wegazi kufanele ubhekwe zombili ngemuva kwesidlo sakusihlwa nangaphambi kokulala.
Okwamanje, izingcezu ezi-4 zamabhisikidi e-soda noma ingilazi eyodwa yobisi (225 ml) afakwe kahle; ukukhathazeka okukhulu kakhulu akufanele kukhokhwe ukuthi i-hyperglycemia yenzeka ngemuva kokudla ngaphambi kokulala; kufanele wazi ukuthi kuzokhiqizwa ingozi enkulu ngemuva kokuvela kwe-hypoglycemia.
Ngokucacile, lezi zindlela zimane nje zingezindlela zokwelapha zesikhashana zenzalo yesifo sikashukela i-mellitus dawn phenomenon noma umphumela weSomogyi.
Ezimweni eziningi, uma ama-hypoglycemics edinga ukulungiswa, udokotela ubonakale kangcono ngesikhathi sokwelashwa. Izinhlobo zokwelashwa ezifanele kakhulu zizokhethwa odokotela ngokuya ngezimo zangempela zokugula.
Ngakho-ke, ushukela omkhulu we-plasma glucose uvame ukubangelwa yizizathu ezine:
1. Ukudla ngokweqile ukudla izolo kusihlwa. Izixazululo: Thatha ukudla okuncane; noma unciphise kahle inani lokudla okugcwele ngamafutha namaprotheni.
2. Ukulala kabi izolo. Izixazululo: Lala kusenesikhathi ngaphambi kokufaka imodi yokulala; futhi musa ukubhekabheka umakhalekhukhwini ngaphambi kokulala.
3. Isifo sikashukela mellitus kokusa kokusa. Izixazululo: Yiba nokudla okwengeziwe ngosuku kodwa ukudla okuncane ekudleni ngakunye; noma wandise umthamo we-hypoglycemics enikezwe ngaphambi kokulala ngaphansi kokuqondisa kodokotela.
4. Umphumela weSomogyi. Izixazululo: Uma i-glucose yangaphambi kokubeletha ingu- <6.5 mmol / L, ingilazi eyodwa yobisi kufanele idakwe, noma kuthathwe ezinye izingcezu zebhasikidi.
Ikhasi elilandelayo: Ulwazi Oludingekayo Lwezingane Zesifo Sikashukela